Scientist.com bilaabay madal blockchain ku salaysan xaqiijinta xogta a - Blockchain News
Laga yaabaa 1, 2018 admin
Scientist.com bilaabay madal blockchain ku salaysan xaqiijinta xogta a
Saynisyahanka suuqa internetka cilmi outsourced, ayaa madal blockchain ku salaysan xaqiijinta xogta a, ku dhawaaqay shirkadda Isniintii.
The “DataSmart” madal ogolaan doonaa shirkadaha bayotechnoolajiyadda iyo dawooyinka si ay u muujiyaan muujiyay xogta cilmi elektaroonig gudbiyay nidaamiyo – gaar ahaan wixii shirkadaha helo inta lagu guda jiro marxaladaha preclinical iyo caafimaad ee horumarinta daroogada.
“In cilmi biopharma waxaan u baahan nahay technology blockchain si loo xaqiijiyo iyo aqoonsiga sahaydu iyo si loo hubiyo in daacadnimada macluumaadka cilmi baadhista,” Chris Petersen, Scientist.com ee CTO iyo aasaasaha ku sheegay hadal uu.
Biinanka suunka had iyo p ...
koob stock - Darbiyada of iibsiga iyo iibinta
Waa maxay "derbiga" f ...
Post Previous:St. Louis Federal Reserve: Seeraar waa Like Lacagta joogtada ah
Post Next:Argentina LOO BAAHANYAHAY si loo soo dajiyo 4,000 TO 5,000 ATM CRYPTO dalka
Laga yaabaa 7, 2018 at 4:55 PM
solinopv ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 14, 2018 at 10:03 AM
Puc ayaa sheegay in:
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Mahad badan
Lequire ayaa sheegay in: